मनोरंजन Archives - Khabar Samachar
रश्न : म २२ वर्षको भएँ । अहिलेसम्म मैले यौनसम्पर्क गरेको छैन । कहिलेकाहीं बाहिर यौनसम्पर्क राखूजस्तो पनि लाग्छ, तर यौनरोग सर्ला कि भन्ने डर लाग्छ । त्यही भएर अहिलेसम्म बाहिर यौनसम्पर्कको चाहना पूरा गर्न मैले हस्तमैथुन गर्ने गरेको छु । म दैनिकुजसो हस्तमैथुन गर्ने गर्छु । यसले कतै भविष्यमा …
2 days ago	340
काठमाडौँ । हुन त हाम्रो समाजमा श्रीमान् श्रीमतीबीच अनिवार्य यौनसम्पर्क हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । उनीहरुले सहवास गर्न कुनै पनि मेहनत गर्नुपर्दैन । जब सम्भोग गर्न मन लाग्छ गर्न पाइन्छ भन्ने सोच पनि नभएको होइन । झन हिन्दूधर्ममा त श्रीमान् श्रीमतीबीच सृष्टिको निरन्तरता गर्नलाई यौनसम्पर्क अनिवार्य भनिएको छ । तर …
2 days ago	127
म २७ वर्षीय अविवाहित पुरुष हुँ । यौन सम्बन्धमा रुचि भए पनि अध्ययनमा व्यस्त हुनुपर्ने भएका कारण मेरी गर्लफ्रेन्ड पनि छैनन्, तर हप्ताको एक–दुई पटकजस्तो स्वप्नदोष हुन्छ । सपनामा आफूले चिनेका अनि नचिनेका महिलासँग यौनसम्पर्क भएको देख्छु । भोलिपल्ट सपनाका कारण मनमा छटपटी हुन्छ । यस्तो समस्या किन हुन्छ ? …
2 days ago	719
मेरो नाम संगित हो म २४ बर्षको भएं, म काठमाण्डौको गाउँमा एउटा बृहत परिवारमा जन्मिएको हुँ । मेरो घरमा ३ जना दाजुभाइ र ४ जना दिदि छन र म सबै भन्दा कान्छो छोरो हुँ । मेरो जेठो दाइ र मेरो उमेर १३ बर्षको फरक छ । उहांको विबाह २० बर्षको …
प्रश्न : म अहिले २६ वर्षको भएँ । मेरो विवाह भएको पाँच वर्ष भयो । हाम्रो एउटा छोरा चार वर्ष पुग्दैछ । श्रीमतीसँग सम्पर्क गर्दा म १०–१५ मिनेटमै पर्याप्त आनन्दित भै शिथिल हुन्छु तर मेरी श्रीमतीलाई सन्तुष्टि प्राप्त हुँदैन अनि उनी गुनासो गर्छिन् । यसको समाधान के होला ? असमान …
३२ वर्षीया युवती हुँ । करिब ७ वर्ष अघि मेरो एकजना केटा साथीसँग यौनसम्पर्क भएको थियो । मलाई यौनसम्पर्क गर्न अति इच्छा हुन्छ तर मैले कसैसँग पनि यौनसम्पर्क गरेकी छैन किनभने ममा चाहना भए पनि अर्को पुरुषसँग यौनसम्पर्क राख्ने सोच मात्र राख्दा पनि एकदम डर लागेर आउने, मुटु कमजोर हुने, …
बुटवलको होटलमा वेश्यासँग बिताएको त्यो होल्ड नईट… … !
5 days ago	114
होटल प्याराडाइजको रूम नं. १५ मा छु एक्लै…..। यो होटल बुटवलको हो । बुटवलमा कहाँनिर पर्छ भनिरहन आवश्यक छैन यो कथाको लागि । साथीहरू रेयुकाई १८ औं शाखाको सेमिनारमा गएका छन् । म भने अलि बिसञ्चो भएको कारण गइनँ । यसौ भनौँ अल्छी लागेको कारण बिरामी भइ टोपलेँ र बसेँ …
6 days ago	87
“कसो-कसो एकदिन फेसबुकमा”find friend”तिर नजर लाउन मन लाग्यो।त्यहा धेरै थरीका”आईडीहरु थिए।।त्यसै बिच म पनी हेर्दै थिए”खोई कसरी मेरो नजर तिम्रो फोटो तिर गयो।।त्यहा एउटा छुट्टै आईडी थियो।हतपत गएर,त्यो आईडी चियाए”त्यहा तिम्रो फोटो देखे।।सायद पुरानो आईडी होला भन्दै”त्यस भित्र फोटो हेर्दै गए,तर अपसोच त्यो पुरानो आईडी नभएर”कसै सँग बोल्ने गोप्य आईडी …
बुढो भएको महसुस भयो ? यसरी लिनुस यौन सन्तुस्टी
डा.शिखाकिरण सिंह , उमेर ढल्किँदै गएपछि पुरुषहरूलाई प्रोस्टेटको समस्याले दुःख दिन्छ । प्रोस्टेट ग्रन्थि, मुत्र थैलीको मुनि हुन्छ र यसले पिसाब बग्ने नलीलाई छोपेर राखेको हुन्छ । प्रोस्टेटमा समस्या देखियो भने सुरुमा पिसाब फेर्दा असजिलो हुँदै जान्छ । जस्तोः पिसाब फेर्न सुरु गर्न गाह्रो हुनु, एकचोटि पिसाब सुरु भए पछि …